Daawo muuqaalka: Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Lagu soo Dhaweeyay B/weyne |
Daawo muuqaalka: Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Lagu soo Dhaweeyay B/weyne
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax ayaa galabta dib ugu laabtay beledweyne, ka dib markii uu muddo uu ku maqnaa magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada, saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya, Saraakiil ka tirsan ciidamada Jabuuti ee Hiil Walaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi fataax Xasan afrax ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyay gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka banaadir Cabdi Fataax Ibraahim Shaaweey.
Gudoomiyaha ayaa markii uu ka soo dagay diyaaradii sida waxa uu gacan qaaday dadkii ku sugyay garoonka, isagoona soo maray deeganka Ceel Jaale halkaas oo ay ku jiran dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxana uu soo kormeeray dadka halkaasi la jiifo cudurka, isagoona gaarsiiyay daawo uu ugu tala galay dadka la jiifa cudurkaasi.
C/fataax Xasan Afrax oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu dib ugu soo magaalada B/weyne isagoona tilmaamay in lala tacaalidoono dadka dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka.
Halkaan hoose ka daawo soo dhaweyntii loo sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan.